“के जनता नेतागणका भोट बैंक मात्रै हुन “ ? - Nepali Nepse
“के जनता नेतागणका भोट बैंक मात्रै हुन “ ?
२४ चैत्र २०७५, आईतवार २०:५५
हाम्रो जीवनकालको सबभन्दा ठूलो विपत्ति र महाविनासले थिलथिलो देश बल्लतल्ल तंग्रिदैँ गर्दा अतित भुल्न नपाउँदै फेरी हामिले अर्को विपत्ति बेहर्नु परेको छ !
सरकार कुम्भकर्ण निद्रामा सुतिरहने हुँदा तिन वर्षसम्म पनि कछुवाको गतिमा अघि बढ्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कार्य अहिले सम्म सकिएको छैन् !
बर्षेनी झाडा-पखालाको प्रकोप जाजरकोटले थेग्न नसक्ने भएको छ । जीवनजल नपाएर जाजरकोट जर्जर भइरहेको बेला तराईका जिल्लाहरूमा आँधी र हुरीबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेको बढेकै छ ।
मान्छेहरूलाई रात र दिन बिताउन गार्हो भइरहेको छ । अहिले खाए भरे के खाने हो अझ कति दिन अन्न देख्न नपाइने हो, ठेगान छैन । भोलिका भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको भविष्य अन्धकार छ , रोगी र बृद्ध बृद्धाहरुको अबस्था हेर्दा मनमा जतिपटक हेर्यो त्यतिपटक झनझन मेरा आँखाका खोंचहरू आँसुले भरिएर आयो । मनभित्र आँधी मात्र होइन, सुनामी नै चल्यो । गिदी उम्लिएर टाउको पड्कनै लागेको बम जस्तै भयो । जतिजती सुन्दै गएँ त्यहाँका पिडाहरु त्यतित्यती छातिभित्र ज्वालामुखी विस्फोट होला जस्तो हुँदै गयो । सारै उकुस मुकुस भयो ।
बेलुका सद्दे सुतेको मान्छे बिहान कहिल्यै नब्युँझने चीर नींदमा डुब्नेहरूको संख्या दिनानुदिन बढेको बढेकै छ ।
हे पशुपतिनाथ ! मेरो देशलाई के भइरहेको छ ? बचाऊ प्रभु बचाऊ !!
जनता यस्तो विषम परिस्थितिमा अल्झिरहेको बेला नेताहरू वातानुकूलित बंगलामा बसेर सत्ताको अंकगणित मिलाउन कोशिस गरिरहेका छन् । मुखिया हजुर ! के हामी जनता मदारीले नचाउने बाँदर हौं ? हजुरहरूले जता नचायो त्यतै नाचिदिनु पर्ने ?
कहिले शीतलहरले, कहिले भुकम्पले, कहिले आँधी हुरी त कहिल्यै झाडा पखालाले दिनदिनै ज्यान गुमाइरहेका ती निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवश चमार, डोम, दुसाध,….गरिब दलितहरू यो देशका नागरिक हुन् कि होइनन् ? आँधी र हुरीबाट प्रभावित भएर जिवन मरणको दोषाधमा अल्झिएर औषधि उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेका बारा र पर्साका ती दुखी गरीबहरू यस देशका मतदाता हुन् कि होइनन् ? यदि हुन् भने कम्तिमा हजुरहरू वातानुकूलित बंगलामा राज हुँदा उनीहरूले बच्न एकसरो कपडा र राति ज्यान छोप्ने कम्बल पाउनु पर्छ कि पर्दैन ? हजुरहरू जहाज चढेर ज्वरो जाँच्न बिदेश जाँदा त्यहाँका जनताले बाँच्न पाउनु पर्छ कि पर्दैन ? कि जनता तपाईँहरूको भोट बैंक मात्रै हुन ?”